Dowladda Itoobiya oo Saami Dhaqaale Ku Yeelatay Dekadda Dooraale Ee Jabuuti.
Wednesday May 02, 2018 - 09:20:17 in Wararka by Super Admin
Wararka ka imanaya dalka Jabuuti, ayaa waxay sheegayaan in madaxweynaha dalkaas Ismaaciil Cumar Geelle iyo ra'isalwasaaraha cusub ee Itoobiya ay kala saxiixdeen heshiis ay Xabashidu saami ugu yeelanayaan dekedda Dooraale ee dalkaas.
Inkastoo ay xogta heshiiskan halista ah qarisay dowladda Jabuuti, haddana waxaa kashifay oo bannaanka soo dhigay war baahinta Itoobiya, oo sheegtay in kulan usbuucan dhacay ay laba hogaamiye ku kala saxiixdeen heshiiska.
Wakaaladda Wararka Dalka Itoobiya ayaa baahisay in Ismaaciil Cumar Geelle iyo Abiye Axmed ay wada saxiixdeen heshiis ay saami dhaqaale ku heleyso Itoobiya, ganacsatadeedana u ogolaanaya iney maal gashadaan dekedda Dooraale oo ah insha ugu weyn ee ay wax kala soo degto.
Shirkad Itoobiyaan ah ayaa la filayaa iney la wareegto dekedda Dooraale, maadaama ay meesha ka baxday shirkaddii Imaaraadka ee DPWORLD.
Shirkadaha ugu cad-cad ee ay Itoobiya dooneyso iney u dhiibato dekedda Dooraale ayaa waxaa kamid ah shirkadda isgaarsiinta ee Ethio-Telecom iyo sharikadda Xoogga Korontada.
Si toos ah looma sheegin inta uu gaarayo saamiga dhaqaale ee ay Itoobiya ku leedahay dekedda Dooraale, waxaana ay tani muujineysaa inuu ka badan yahay kan ay ku leedahay dekedda magaalada Berbera, oo gaaraya 19%.
Warbaahinta Tigreega ayaa sheegtay in dhameystirka heshiiskan loo xil saaray guddi heer wasiiro ah kuwaasoo ku kulmi doona magaalada Adis-ababa ee caasimadda dalkooda.
Arrintan ayaa waxay ka marqaati kacaysaa in Itoobiya xaqiijineyso wixii ay ku taameysay quruun badan oo ahaa in ay qabsato xeebaha iyo dekedaha Soomaaliya.
Kumannaan kun oo qof oo Soomaali ah ayaa naftooda u waayay sidii ay Itoobiya uga difaaci lahaayeen dalka iyadoo jiilba jiilka kale uu uga tagayay dardaaran ah in Xabashida la iska dhiciyo, laakin waxay maanta Xabashidu heshay dad cumalo ah oo dhiiggii awoowshaad hadiyad uga dhigay Xabashida, islamarkaana siiyay xeebihii iyo dekedihii wadanka.
Xigasho: AmirNuur Media